Mashoko Akanaka Akanyorwa naJohani 14:1-31
14 “Musarega mwoyo yenyu ichinetseka.+ Tendai muna Mwari;+ tendaiwo mandiri. 2 Mumba maBaba vangu mune nzvimbo zhinji dzekugara. Dai zvisina kudaro, ndingadai ndakuudzai, nekuti ndiri kuenda kunokugadzirirai nzvimbo.+ 3 Uye kana ndaenda, ndanokugadzirirai nzvimbo, ndichadzoka ndozokutambirai kuti muve kwandinenge ndiri, kuti pandinenge ndiri imi muvepowo.+ 4 Uye munoziva nzira yekwandiri kuenda.” 5 Tomasi+ akati kwaari: “Ishe, hatizivi kwamuri kuenda. Nzira yacho tingaiziva sei?” 6 Jesu akati kwaari: “Ndini nzira+ nechokwadi+ neupenyu.+ Hapana anouya kuna Baba asina kusvika nekwandiri.+ 7 Kudai maindiziva, mungadai muchizivawo Baba vangu; kubvira iye zvino mava kuvaziva uye makavaona.”+ 8 Firipi akati kwaari: “Ishe, tiratidzei Baba, tobva tangogutsikana.” 9 Jesu akati kwaari: “Nenguva yese iyi yandanga ndiinemi, nanhasi hausati wava kundiziva here Firipi? Munhu wese anenge aona ini aonawo Baba.+ Zvino sei uri kuti, ‘Tiratidzei Baba’? 10 Hautendi here kuti ndiri pamwe naBaba uye Baba vari pamwe neni?+ Zvandinokutaurirai hazvisi zvangu ndega,+ asi kuti Baba, vanoramba vari pamwe neni, ndivo vari kuita mabasa avo. 11 Nditendei kuti ndiri pamwe naBaba uye Baba vari pamwe neni; kana musingatendi izvozvo, tendai nekuda kwemabasa ega.+ 12 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, munhu wese anotenda mandiri achaitawo mabasa andinoita; uye achaita mabasa makuru kupfuura aya,+ nekuti ndiri kuenda kuna Baba.+ 13 Uye zvese zvamunokumbira muzita rangu, ndichazviita, kuti Mwanakomana aite kuti Baba vakudzwe.+ 14 Chese chamunenge makumbira muzita rangu ndichachiita. 15 “Kana muchindida, muchachengeta mirayiro yangu.+ 16 Uye ndichakumbira Baba, vokupai mumwe mubatsiri* kuti ave nemi nekusingaperi,+ 17 iwo mweya wechokwadi,+ uyo nyika isingagoni kugamuchira, nekuti haiuoni kana kuuziva.+ Imi munouziva, nekuti unoramba uinemi uye uri mamuri. 18 Handisi kuzokusiyai mega.* Ndichauya kwamuri.+ 19 Kwangosara nguva shomanana, uye nyika haichazondioni, asi imi muchandiona,+ nekuti ndiri mupenyu uye muchava vapenyu. 20 Pazuva iroro muchaziva kuti ndiri pamwe naBaba vangu uye imi muri pamwe neni uye ini ndiri pamwe nemi.+ 21 Munhu wese ane mirayiro yangu uye anoichengeta ndiye anondida. Uye munhu wese anondida achadiwawo naBaba vangu, uye ini ndichamuda ndozviratidza pachena kwaari.” 22 Judhasi,+ asiri Iskariyoti, akati kwaari: “Ishe, chii chaitika zvekuti munoda kuzviratidza pachena kwatiri, kwete kunyika?” 23 Jesu akamupindura achiti: “Kana munhu achindida, achachengeta shoko rangu,+ uye Baba vangu vachamuda, uye tichauya kwaari togara naye.+ 24 Munhu wese asingandidi haachengeti mashoko angu. Shoko ramuri kunzwa harisi rangu, asi nderaBaba vakandituma.+ 25 “Ndakutaurirai izvi ndichiinemi. 26 Asi mubatsiri, iwo mweya mutsvene uchatumirwa naBaba muzita rangu, uchakudzidzisai zvinhu zvese nekukuyeuchidzai zvinhu zvese zvandakakuudzai.+ 27 Ndinokusiyirai rugare; ndinokupai rugare rwangu.+ Handikupii rugare semapiro anoita nyika. Musarega mwoyo yenyu ichinetseka kana kuti ichitya. 28 Manzwa ndichiti kwamuri, ‘Ndiri kuenda uye ndichadzoka kwamuri.’ Kudai maindida, maitofara kuti ndiri kuenda kuna Baba, nekuti Baba vakuru kwandiri.+ 29 Saka ndakuudzai iye zvino zvisati zvaitika, kuti mutende kana zvazoitika.+ 30 Handichatauri zvakawanda nemi, nekuti mutongi wenyika+ ari kuuya, asi haana simba pandiri.+ 31 Asi kuti nyika izive kuti ndinoda Baba, ndava kuita zvandakaudzwa chaizvo naBaba kuti ndiite.+ Simukai, ngatibvei pano.
^ Kana kuti “munyaradzi.”
^ Kana kuti “muri nherera.”